New Heavy Duty Environment Analog နံရံတပ်ဆင်ထားသည့်အဏ္ဏဝါရွက်တိုင်ရေစိုခံတယ်လီဖုန်း - JWAT306, တရုတ် New Heavy Duty Environment Analog နံရံတပ်ဆင်ထားသည့်အဏ္ဏဝါရွက်တိုင်ရေစိုခံတယ်လီဖုန်း - JWAT306 ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ - Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co. , LTD
စက်မှု VoIP တယ်လီဖုန်း
သင်ဒီမှာပါ : မူလစာမျက်နှာ>ကုန်ပစ္စည်း>မိုးလေဝသကာကွယ်သောတယ်လီဖုန်း
non switchboard ပေါက်ကွဲမှု - အထောက်အကူပြုတယ်လီဖုန်း
ပေါက်ကွဲမှု - အထောက်အထား Amplifier
ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်နိုင်တဲ့ Junction Box ကို
ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား Fiber Optic တယ်လီဖုန်း
New Heavy Duty Environment Analog နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသောအဏ္ဏဝါဆိပ်ကမ်းရေစိုခံတယ်လီဖုန်း - JWAT306
This aluminium alloy material weatherproof telephone is newly-designed IP66-67 weather resistant industrial telephones.
This Water Proof Telephone is fully contained withinacorrosion and vandal resistant cast aluminium weatherproof case withapivoted door protecting against dust and moisture ingress, resulting inahighly reliable product withalong MTBF. The Analog Wall Mounted Waterproof Telephone is very popular
for tunnels,mining,Marine, Underground, Metro Stations, Railway Platform, Highway Side, Hotels, Parking Lots, Steel Plants, Chemical Plants, Power Plants And Related Heavy Duty Industrial Application, Etc.
၁။ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသေဆုံးသောအခွံ၊ မြင့်မားသောစက်မှုစွမ်းအားနှင့်ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
2.Standard Analogue ဖုန်း။ SIP / VoIP၊ GSM / 3G ဗားရှင်းတွင်လည်းရနိုင်သည်။
(၃) Heavy Duty Handset ကြားနိုင်သည့်နားကြပ်နှင့်လက်ခံနိုင်သည့် Noise Cancel microphone ။
IP4-IP66 သို့အကာအကွယ်ပေးကာကွယ်ခြင်း ၅ ။
5.Slessless Steel Illuminated Keypad၊ ခလုတ်များကိုအမြန် dial ခလုတ်အဖြစ်ပရိုဂရမ်သွင်းနိုင်သည်
8. ဆက်သွယ်မှု: RJ11 ဝက်အူ terminal ကို pair တစုံ cable ကို။
၉. အသံမြည်သံ - 9dB (A) ကျော်။
10. Multiple အိမ်ရာနှင့်အရောင်များ။
၈။ CE, FCC, RoHS, ISO12 လိုက်နာမှု။
လက်မှတ်: SGS, ISO 9001: 2000, CE, FCC, ROHS, CNEX, IP65 / IP66 / IP67,
1Packing: 1 set/carton,6kg/carton
ကုန်ပို့ရက်စွဲ: 3-7 ရက်ပတ်လုံး
MOQ: 1 အစုံ
Supply နိုင်ခြင်း: 5000 အစုံ / လ
ငွေပေးချေမှုကာလ ညှိနှိုင်းမှုအတွက် T / T, Paypal, Alibaba ကုန်သွယ်ရေးအာမခံ၊ L / C သို့မဟုတ်အခြားသူများ။
ကမ်းလှမ်းချက်နမူနာ - နမူနာများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာဖောက်သည်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
နမူနာအစီအစဉ် - စံပြနမူနာများကို ၃ ရက်ခန့်ပို့ရန်ပြင်ဆင်ထားလိမ့်မည်။
ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု ၂ နှစ်အာမခံနှင့်အပိုပစ္စည်းများကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ရရှိနိုင်သည်။
ဆက်သွယ်ရန် Tel: 0086-574-58223619, Mob: +86-13858299692
Beacon Light ဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ရေစိုခံမြေအောက်သတ္တုတွင်းတယ်လီဖုန်း - JWAT310
တက် Sign နှင့်ကယ်တင်!အထူးသီးသန့်အီးမေးလ်ကမ်းလှမ်းချက်များ & ကန့်သတ်အချိန်လျှော့စျေးအထူး
Ningbo Joiwo ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
လိပ်စာ - မရှိပါ။ 8 အလယ်လမ်းမကြီး Guoxiang တံတား Lanjiang လမ်း Yuyao Zhejiang
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Ningbo Joiwo ပေါက်ကွဲမှုကာကွယ်နိုင်သောနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ 浙 ICP 备 14038348 号 -1